သက်တန့်ချို: ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ၂ကြိမ်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဂျုံမုန့်ပညာရှင် Liu Hui
ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ၂ကြိမ်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဂျုံမုန့်ပညာရှင် Liu Hui
ဂျုံမုန့်ပညာရှင် Liu Hui ဆိုသူက ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၄ ရက်နေ့က တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်း Jianjin မှာ ဂျုံပူပေါင်း တစ်ခုမှုတ်နေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ Liu ဟာ ရှန်ဟိုင်းမှာ ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း ၂ ကြိမ် ၀င်အောင် ကြိုးစားအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမတစ်ခုကတော့ ၁၉၁၈ မီတာအရှည်ရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အချင်း ၁.၅ မီတာရှိ တဲ့ ဂျုံပူပေါင်းတစ်ခုကို မှုတ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
မူရင်း - Pastry cook Liu Hui blowsapastry balloon in Tianjin, north China, May 24, 2012. Liu created two Shanghai Great World Guinness Records by stretchinga1918-meter-long noodle and blowingapastry balloon with diameter of 1.5 meters. (Xinhua/Zhang Chaoqun)
Link - http://news.xinhuanet.com/english/photo/2012-05/25/c_131609799.htm
Posted by သက်တန့်ချို at 10:16 AM
Labels: ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း, ထူးဆန်းသောအစားအစာများ